Touring AmaNgisi Premier League ngu zemininingwane | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > Touring AmaNgisi Premier League ngu zemininingwane
Isikhathi sokufunda: 6 amaminithi(Kugcine ukubuyekezwa On: 25/12/2020)
Ukuze izihambi ngubani kwenzeke ukuba abe nesithakazelo ezemidlalo, babuka England I-Premier League ukufana kungaba ekhethekile nakho. Ngenkathi amaqembu ambalwa ifike futhi niwe phiko isizini ngayinye, okusho kungcono never nse kabili zilandelana, kungcono ngaso sonke isikhathi ukuthi la mazwi ayiqiniso uma ngelulela wonke eNgilandi naseWales. Lokhu empeleni kwenza Premier League uhlobo uhambo zemvelo kule ubani ongafuna ukuhlola izwe. Luhilela imizi evelele kunazo zonke, ezinye ekhombisa abanothando kakhulu wendawo isiko, futhi ezinye ngokweqiniso izinkundla ezingakholeki. plus, ugibele kusukela komunye umuzi olandelayo angakunika amazwibela emihle yasemaphandleni abadumile British!
Ngokweqiniso lolu hlobo uhambo kungase zenziwe zonke izinhlobo izindlela ezahlukene, unikezwa ukuthi Premier League siqukethe 20 amaqembu isizini ngayinye. Lena into isampula Nokho, wemizila ebekwe ezahlukene ungathatha kanye emadolobheni, izinkundla, futhi amaqembu ungabona.
Kungcono ukuqala lolu hlobo of uhambo eLondon ngenxa yezizathu ezimbili. Okokuqala, kungcono lapho uku okungenzeka kakhulu fly ku kunjalo. futhi yesibili, kungcono ukuba eziningana amakilabhu Premier League ikhaya, okusho kungcono endaweni enhle ukuqala kanye ekupheleni uhambo lwakho I-loop enhle ezungeze Britain. Ungaqala nge amakilabhu eziningana, kodwa Ngingathanda batusa bebona Chelsea at Stamford Bridge. Indawo kuyinto enhle kakhulu, nomunye simo Premier League izinkundla omema 140 zeminyaka yomlando futhi uhlamvu njengoba izakhi ukuthi uyigcine phakathi best. Futhi iqembu cishe njalo yokuncintisana (futhi kufanele ibe 2018 kanjalo).
Kusukela London, omunye umzila okunengqondo ukuqala eningizimu ngase Brighton. Kuyinto ride esheshayo kakhulu egcina kwelinye engcono lolwandle amadolobha eNgilandi e Brighton. London Victoria esiteshini, London Bridge Station, futhi London St. Pancras esiteshini zonke zibe ugibele ngqo ukuthi uthathe cishe ihora.
Brighton esiya eCardiff
Kwake kwathi ngo-Brighton, ungakwazi yokwelula izinyawo zakho bazulazule kwezinye izindawo ezikhethekile ngempela. pier leli dolobha ezidumile (futhi sibonga bezijabulisa kakhulu nomkhathi wawo fair-like), futhi kukhona izitolo ezimbalwa nje kuphela ubudala futhi yokudlela izifunda kuwufanele ukuhlola. Ibhola ohlakaniphe, uzokhokhiswa amabombo Falmer Stadium, okuyinto ingenye abasanda kuhlanganyela kule phiko. Brighton & Hove Albion akuyona Umthombo ku indiza phezulu football IsiZulu, kodwa abalandeli bayo kungaba abanothando futhi ukufana yindlela enhle ukuchitha i ntambama noma ebusuku endaweni efudumele lolwandle edolobheni ekwindla.
ILille ukuya eLondon Eurostar Sitimela
I-Rotterdam iya eLondon Eurostar Sitimela
I-Antwerp to London Eurostar Trains
Ngemva Brighton, uzodinga ukuqala ejikeleza up ngasentshonalanga, futhi kukhona endaweni ezimbalwa ongakhetha. Ungase uhambo Bournemouth noma Southampton e Southwest, Ngokwesibonelo, njengoba bobabili amadolobha abe Premier League amaqembu. Kodwa ngoba football kungcono wenyukela enyakatho (futhi banjalo amadolobha, ngokobufakazi obukhona), kungcono ukuqala nokuya enyakatho kanye. Ngakho Ngingathanda batusa oshona Cardiff, Wales. Izitimela kusukela Brighton esiteshini esiya eCardiff Central ingaqalisa kusuka amane kuya emine nengxenye amahora, nge esisukela izinguquko eyodwa kuya kwemithathu. izitimela kulo mzila ukusebenzisa usuku ucishe yonke.
Ngo Cardiff, uzoba bebona Cardiff City eCardiff City Stadium, okuyinto indawo sasivumela ukusondelana alolu. Futhi uma kwenzeka isikhathi uhambo lwakho ukuze ubone umdlalo umbango ngokumelene Swansea City, uzoba ngemvume ukuze uthole real okwehla esiphundu. Lokhu kufanele ekugcineni ube stop sasivumela okusheshayo Nokho silibangise ezinkulu football amadolobha kude enyakatho. Laba bobathathu- ukuze amahora amane isitimela esuka Cardiff Central eLiverpool Lime Street izincomo zami. Kuyinto sasivumela njalo futhi kuqondile umzila, ngokuvamile nge nje izinguquko elilodwa noma amabili, futhi kuthatha wena inhliziyo football IsiZulu. Ingasaphathwa isitimela kuthatha khona eduze Cotswolds, endaweni yemvelo langa lokho izivakashi futhi ngokwalo.
Ngo Liverpool, ungase ufune ukuba sibekele eceleni isikhathi esithile ukuhlola, njengoba kungcono ngempela umuzi eyiqiniso nemangalisayo. Kodwa ibhola namanje ukukhangana main. Anfield, lapho Liverpool udlala, is ukuba phakathi best Premier League izinkundla eyaziwa, futhi abaningi bakholelwa lokhu kungaba ngonyaka iqembu ukuze uthole kabusha Premier League inkazimulo uthwebule ubuqhawe. Yilokho nje ukusho ukuthi le nkundla, aziwayo kakade ukuze athole amandla ayo, kufanele kuyachwaza onyakeni olandelayo noma ngakho, futhi ayikwazanga kahle ukwenza i-best football nesipiliyoni konke UK.
kule iphuzu, kukhona izinketho ezimbalwa. Uma isikhathi sakho lilinganiselwe, kungase kube ngcono ukuba bathathe uhambo kufushane kakhulu Manchester, ngaphambi kokuthi abuyele eLondon. Uma kukhona isikhathi, Nokho, Ngingathanda batusa uya esedlule Manchester nasenyakatho, ngalokho kumele kube yiminyaka kohambo lwamahora amathathu kusukela Liverpool Lime Street Newcastle. Ungathola ngqo ukugibela, futhi ngenkathi lokhu libukeka elula ende kunazo lonke lolu hlaka kumephu, akuyona ngempela uhambo ezimbi.
Newcastle ukuze Manchester
St. James 'Ipaki e Newcastle kungenzeka enkundleni amahle kule phiko, ngisho noma ngeke ngempela ukufanisa umlando ka endaweni efana Anfield. Kuyinto enhle, olulodwa kwafika, futhi omunye lapho kungaba khona impela kancane passion. ngempela, ngaphambi muva nje league ngikwazi ukuqala, kwasikiselwa Newcastle ungase uphatheke kabi Tottenham Hotspur ngenxa buzz entsha-isizini Tyneside futhi ugqozi futhi inkolelo yokuthi kungavela lesi sixuku. Lokho ecasukile akazange khona, kodwa lokhu kuseyindlela indawo idolo ukubukela ezemidlalo ngezizathu ezifanayo ekhonjiwe. Lokho kwenza kube yafakwa kwenye uyakufanelekela kakhulu.
Ngemva umdlalo okusheshayo e Newcastle, ungakwazi ukubamba isitimela emuva Manchester, mhlawumbe ku Ngalolo suku uma ukuhlela siveza. Newcastle Central Station ukuze Manchester Victoria kufanele kube ezimbili kanye nengxenye ihora uhambo ngaphandle ezingaphezu kweyodwa ushintsho.
Zikhona ongakhetha eziningi Manchester, njengoba ezimbili amaqembu phiko evelele kunazo zonke – Manchester City futhi Manchester United – ushayele ekhaya edolobheni. Uma ungumuntu ikakhulukazi ku football futhi ubhekene uyisebenzisa njengendlela a uhambo ezinhle, kufanele sizame ukubamba womabili amaqembu ngesikhathi esisodwa, uma uzokuhambisa ivumela. kungenjalo, ungase flip kanye uhlamvu. Man Utd. Sika Old Trafford kuyinto mlando inkundla eyodwa nabalandeli Amazing; Etihad Stadium Man City sika ngaphezulu state-of-the-art, futhi City bekulokhu ithimba kangcono ngasekupheleni.
Uma usuqedile e Manchester kungcono bushelelezi, ezimbili kanye nengxenye noma amahora amathathu isitimela ukugibela emuva London kusukela Manchester Victoria noma Manchester Piccadilly. Ngaleso sikhathi, uhambo kuyinto ukugoqa! Nakuba ungase uthande ukusebenzisa isikhathi sakho asele e-London ukubona omunye amakilabhu wena wangabona ekuqaleni uhambo. njengoba kushiwo, zikhona ongakhetha eziningana ezinhle.
Ingabe ukulungele ukuhlola zemininingwane travel futhi ujabulele ezinye lezinyawo? website engcono Oda Uqeqesha amathikithi kuyinto Gcina Isitimela
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi ungene kusayithi lakho, bese uchofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftouring-the-english-premier-league-by-train%2F%0A- (Skrolela phansi ukuze ubone Shumeka Ikhodi)
#football #ibhola Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi traveltips